I-China i-5 ye-Ply yokucoca ubuso kwi-Shield ye-KN95 yokuThengisa kunye neFektha | VTECH
2.Umaleko wangaphakathi wekhabhoni esebenze unokucoca iigesi okanye ivumba elibi. Ukuya kufikelela kwi-95% yokucoca ngokufezekileyo, indawo yokuphefumla enobukhulu obuyi-360, kwaye ikunikeze ukhuselo oluchasene nothuli.
5.Sebenzisa impumlo eplastiki efihliweyo, inkungu anti, eyakhelwe kwi-cartilage bhulorho, inokuhlengahlengiswa ukuthintela i-voids kunye nokunciphisa ukufakwa kwezinto ezinobungozi.
2.Umaleko wangaphakathi wekhabhoni esebenze unokucoca iigesi okanye ivumba elibi. Ukuya kufikelela kwiipesenti ezingama-95% ukusebenza ngokufayilisha, indawo yokuphefumla enobunzima obuyi-360-degree,zikhusele ngokuchasene nothuli.
Umsebenzi kunye nokusetyenziswa
Ukucoceka kokulungiswa kweemaski zamabakala angama-9595 eesenti ezinobubanzi be-aerodynamic ≥0.3µm ingaphezulu kwe-95%. Ububanzi be-aerodynamic yeebacteria ezihanjwa ngumoya kunye neefungi fungus ikakhulu zahluka phakathi kwe-0.7- 10µm, ekwangaphakathi nokhuseleko lwayo.Ngoku, olu hlobo lweemaski lungasetyenziselwa ukhuseleko lokuphefumla lwento ethile yento, njengokugaya, ukucoca kunye nokulungisa uthuli ziveliswa zizimbiwa, umgubo kunye nezinye izinto. Yila umba wegesi eyingozi eguqukayo .Coca ngokufanelekileyo kwaye ucoce ivumba elingaxutywanga (ngaphandle kwegesi enetyhefu), nceda ukunciphisa inqanaba lokuvezwa kweenkcukacha ezithile ezinokuchaphazeleka (ezinjengokubumba, i-anthrax, isifo sephepha, njl njl), kodwa alunakulucima uqhakamshelwano usulelo, ukugula okanye ingozi yokufa.
Edlulileyo: I-White Ear-loop eChazayo yokuKhuselwa kobuso be-3D
Okulandelayo: I-CE / FDA eqinisekisiweyo ye-KN95 yomamkeli wemibuzo
Ukucoca ubuso ngeMask Mask
Ukuthambeka kweSoftware ye-3D PM 2.5 KN95 Mask
I-KN95 yokulahlwa kobuso obunokulahlwa njengobuso obungenakumbala